Donald Trump oo Maanta Magacaabay Wasiiro Muhiim ah oo Kamid Noqon Doona Xukuumadiisa (VIDEO) - Hablaha Media Network
Donald Trump oo Maanta Magacaabay Wasiiro Muhiim ah oo Kamid Noqon Doona Xukuumadiisa (VIDEO)
HMN:- Madaxweyne cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay saddex wasiir oo muhiim ah, oo ka mid noqon doona xukuumadiisa cusub ee bisha Janaayo la wareegi doona hogaanka dalka Maraykanka.
Warar hoose oo maanta soo baxay ayaa sheegaya in Trump uu senator-ka Jamhuuriga ah ee gobolka Alabama, Jeff Sessions u magacaabay inuu noqodo Xeer Ilaaliyaga guud ee Qaranka Mareyanka.
Waxaa kale ee uu Trump magacaabay Mike Pompeo inuu noqdo agaasimaha guud ee hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, halka General Mike Flynn uu u magacaabay inuu noqdo la-taliyaha amniga qaranka.
Madaxweynaha Cusub ee Donald Trump ayaan weli si rasmi ah ugu dhowaaqin magacaabista uu sameeyey, hase yeeshee ilo-wareedyo dhowr ah oo ku dhow la taliyeyaashiisa ayaa shaaca ka qaaday inay arintani sax tahay.
Sanater-ka uu magacaabay ee Mike Flynn ayaan u baahnaan doonin in aqalka senate-ka Mareykanka uu ansixiyo magacaabistiisa, hase yeeshee Jeff Sessions ayaa wajahi doona su’aalo adag oo kaga iman doona senatar-ada, ayada oo lagu eedeynayo inuu hadda ka hor sheegay erayo cunsurinimo ku jirto.